Usoro kachasị na akụkọ ihe mere eme: United na-agbakwunye 270 Boeing na ụgbọ elu Airbus na ụgbọ mmiri
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » Usoro kachasị na akụkọ ihe mere eme: United na-agbakwunye 270 Boeing na ụgbọ elu Airbus na ụgbọ mmiri
Airlines • Airport • Aviation • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • investments • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Transportation • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
“United Next” na-agụnye mgbakwunye nke 200 Boeing 737 MAX na 70 Airbus A321neo yana atụmatụ iji weghachite 100% nke isi fọdụrụnụ, ụgbọ mmiri dị warara iji gbanwee ahụmịhe ndị ahịa ma mepụta mbinye aka ọhụrụ - ihe dị ka 75% abawanye na adịchaghị elu oche kwa North American opupu, ibu efefe n'elu bins, seatback ntụrụndụ ọ bụla oche na ụlọ ọrụ kasị kasị dị WiFi.
United ga-abawanye ọnụ ọgụgụ nke oche dị n'ofe netwọkụ ụlọ ya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 30% kwa ọpụpụ ma jiri ụgbọ elu buru ibu dochie opekata mpe 200 jets mpaghara mpaghara.
Iwu a na-atụ anya ka ọ mepụta 25,000 nke na-akwụ ezigbo ụgwọ, ọrụ ndị jikọtara ọnụ na United, belata obere anwuru carbon n'oche ọ bụla ma nye onyinye atụmatụ $ 50 kwa afọ na akụ na ụba US site na 2026.
Mgbe ejikọtara ya na akwụkwọ iwu ụgbọ elu ugbu a, United na-atụ anya ịtinye ihe karịrị ụgbọ elu ọhụrụ 500 gụnyere ihe dị ka ụgbọelu ọhụrụ kwa ụbọchị atọ na 2023 naanị.
United Airlines Taa kwuputara nzụta ụgbọ elu Boeing na Airbus dị 270 ọhụrụ - nke kachasị jikọtara ọnụ na akụkọ ihe mere eme ụgbọelu na nke kachasị site n'aka onye ọ bụla n'ime afọ iri gara aga. Atụmatụ 'United Next' ga-enwe mmetụta mgbanwe na ahụmịhe ndị ahịa ma na-atụ anya na ọ ga-eme ka ọnụ ọgụgụ nke oche ndị dị na ụlọ ọpụpụ ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 30%, na-eme ka ikuku carbon dị ala karịa oche ọ bụla ma mepụta ọtụtụ iri puku mma, ọrụ jikọrọ ọnụ ka ọ na-erule afọ 2026, mbọ niile a ga - enwe ga - adị mma ma nwee ike rịawa gburugburu akụnụba US.
Mgbe ejikọtara ya na akwụkwọ iwu dị ugbu a, United Airlines na-atụ anya iwebata ihe karịrị 500 ọhụrụ, ụgbọ elu dị warara: 40 na 2022, 138 na 2023 na ihe ruru 350 na 2024 na gafere. Nke ahụ pụtara na 2023 naanị, ụgbọ mmiri United ga-agbakwunye ihe dị ka ụgbọelu ọhụrụ dị warara kwa ụbọchị atọ.
Aircraftkpụrụ ụgbọ elu ọhụrụ nke United - 50 737 MAX 8s, 150 737 MAX 10s na 70 A321neos - ga-abịa na mbinye aka ọhụrụ nke na-agụnye ntụrụndụ na-anọ ọdụ n'oche ọ bụla, nnukwu bins dị elu maka akpa na-eburu onye njem ọ bụla na ụlọ ọrụ kachasị ọsọ. na-elu-igwe WiFi, nakwa dị ka a na-enwu gbaa anya-na-na-eche na Ikanam ọkụ. Airgbọ elu ahụ na-atụ anya ka ọ na-efe 737 MAX 8 nke mbụ na mbinye aka n'ime oge ọkọchị a wee bido 737 MAX 10 na Airbus A321neo na mbido 2023.
Ihe ọzọ bụ, United Airlines na-ezube iji kwalite 100% nke isi ya, ụgbọ mmiri dị warara na ụkpụrụ ndị a site na 2025, ọrụ ngosipụta pụrụ iche nke na, mgbe ejikọtara ya na ọnụ ọgụgụ ụgbọ elu ọhụrụ na-esonye n'ụgbọ mmiri ahụ, pụtara na United ga-anapụta ọkwa nke ọgbara ọhụrụ ya ahụmahụ ọtụtụ iri nde ndị ahịa na-enweghị atụ ijeụkwụ.
Usoro a ga - emekwa ka ọnụ ọgụgụ United niile na - apụ kwa ụbọchị na oche dịnụ n'ofe ọdụ ụgbọ elu North America, yana ọnụ ọgụgụ ndị isi oche, United FirstSM na Economy Plus®. Kpọmkwem, United na-atụ anya na ọ ga-enwe na nkezi 53 adịchaghị oche kwa North America ọpụpụ site 2026, mmụba nke ihe dịka 75% karịa 2019, yana karịa ndị asọmpi ọ bụla na North America.
"Ọhụụ anyị na-esote United ga-agbanwe ahụmịhe nke United na-efe efe ka anyị na-eme ka azụmahịa anyị kwalite iji zute nlọghachi na njem ụgbọelu," ka United CEO Scott Kirby kwuru. “Site n’ịgbakwunye na ịkwalite ọtụtụ ụgbọ elu a ngwa ngwa site na iji akara aka ọhụrụ anyị, anyị ga-ejikọ ọrụ enyi na enyi na ahụmịhe kachasị mma na mbara igwe, gafee netwọk anyị zuru ụwa ọnụ. N'otu oge ahụ, nkwagharị a na-egosipụta ọrụ dị oke mkpa United na-arụ n'ịgbalite akụ na ụba US - anyị na-atụ anya na mgbakwunye nke ụgbọ elu ọhụrụ a ga-enwe mmetụta akụ na ụba dị ukwuu na obodo ndị anyị na-ejere ozi gbasara okike ọrụ, mmefu njem na azụmahịa. ”